Semalt Inikeza Iingcebiso Ngendlela Yokuphatha I-Google Analytics Referrer Spam
Ngokuqhelekileyo, u-Google analytics ugaxekile ogaxekile ugaxekile owenzeka xa abahlaseli bazama ukuthumelaidatha kwiakhawunti yakho ye-Google Analytics ngokusebenzisa i-Google analytics data collection API ebizwa ngokuba yi-protocol protocol.Ngokwenene, oku akuyiyo yendlela yokuthengisa kwiwebhusayithi yakho. Kodwa ke, izicelo zendlela yokukhohlisa ezithunyelwa kwisiza sakho ngebhodi labanyeunomusa kwaye uyayithanda okanye ayikho, baya kubonisa ekudluliseleni kwakho - les outils de la gestion du temps.
uMichael Brown, uMphathi weNtengiso kuMphumeleli iSemalt ,ithi akusiyo isizathu sokuphelelwa lithemba. Okokuqala, kufuneka ukwazi ukuba indawo yakho ayijoliswe njongo. Abahlaselizivele zidale ii-ID zefakeli kunye nokuthumela iifake zendlela zendlela. Ayikho into eyayiyodwa kodwa inokucaphukisa.
I-Google ifike ngeqhinga lokuncedisa umcimbi. Konke okufuneka ukwenzeukuya kwisitoreji sakho sombonakalo kwisiphathozi somlawuli, prolela phantsi ukuya kwi-Bot yokucoca uze ukhangele inketho, 'Hlanganisa zonke izinto ezivela kwi-bots eyaziwayokunye nezichukumisi. Esi akusona isisombululo sithuba eside, nangona kunjalo ukususela ekubanjisweni kweenkohliso kuya kuvela rhoqo ngosuku.
Esinye isisombululo onokuzama ngayo iifayile ngenjongo yokungabandakanyiba thumele..Oku kubandakanya ukuya kwicandelo lolawulo, uze ufike kwiifayile. Apha ungasetha icebo elibhekiselelwe kulo njengomthumiicebo lokukhutshwa ngaphandle. Oku kufezwe ngokuchofoza ukongeza ifayile, ukhetha uhlobo olumiselweyo, uze uthayiphe amagama eedayibrarikwicandelo lefayile yokucoca.
Nangona kunjalo, nokuba unako ukulayisha ngokupheleleyo indawo yakho kunye nezihlungi zokungabikho, umzuzuIdibanisi entsha yokudlulisa ibonisa, kuya kufuneka uvelise izibhengezo ezintsha kwaye ususe abo badala. Kwakhona, unokugxininiswainani lefayile ofuna ukuyilawula.
Oku kukubamba umbuzo, ngaba ndiyakwenza i-automate izihlungi? Impendulo nguyewe, unokuyaloo ndlela. Umzekelo omhle wenkonzo enjalo yiReferrer Spam Blocker. Yinkonzo enkulu njengoko idibanisa iqonga layoI-akhawunti ye-Google Analytics, kwaye ukhetha umbono ofuna ukuba indawo yakho ikhuselwe. Benza ngokulandelelanayo bangeze iifayile zokungabikhozakho izimvo.
Nangona oku kuyisisombululo esihle, awukwazi ukuyisebenzisa kwiinkampani ezininziabathengi njengoko banemithetho eqinile malunga nendlela iinkonzo zabo ze-SaaS zingafumaneka ngayo ngabanye abantu. Njengokuba okwangoku, le nkonzo yehhala,kodwa ekugqibeleni, baya kulwa nefuthe kwimpumelelo yabo kwaye bazalise imodeli yexabiso, okungenokuba yinto enomdlaumxhasi.
Noko ke, ukuhlunga kuya kufumana kuphela, kwaye iinkonzo ezenzekelayo zithethiukuba uthembeke ngexesha elide. Oku kushiya izitshixo zokuqokelela idatha. Ngolu khetho, idatha yakho ihlungiwe, kwaye i-Google analytics iya kuphelakugcina i-traffics ehambelana nemilinganiselo yakho yesiko. Yindlela ekhethekileyo engayi kuba nefuthe ngabachaphazelekayo. Kwakhona, ikhuselekile kwayeezinokwethenjelwa, ngaphandle kokufuna nayiphi na ulwazi lobugcisa ukuba lubekwe. Oku kwenza kube yindlela ekhethekileyo kwiakhawunti yakho ye-Google Analytics.